Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Soosaarayaasha - Kiimikada Phcoker
β-Lactoglobulin waa borotiinka ugu weyn ee lo'da iyo caanaha adhiga (~ 3 g / l), sidoo kale wuxuu ku jiraa naasley kale oo badan …….
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) fiidiyaha
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Smamnuucista
Magaca Kiimikada β-Lactoglobulin (LG); BLG; β-Lg
Molecular Wsideed 18,300
dhibic kulayl N / A
Application -Lactoglobulin A oo laga helo caano bovine ayaa la isticmaalay:
• adoo ah habeyn u habeynta qalabka TriWave
• Cajiib ahaan u ah ogaanshaha iyo qulqulka β-lactoglobulin ee caano bovine iyadoo loo adeegsado heerka dareeraha koromografiinta dareeraha ee heerka sare ah (HPLC)
• nadiifinta iyo cabirka miisaanka molikalka ee muunadaha ka hortagga
'to-Lactoglobulin' waxaa loo adeegsaday aqoonsiga noocyada hidde-sideyaasha ee 'case-casein' ee caanaha iyadoo la adeegsanayo 'electrohoresis' diiradda saaraya.
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Dulmar guud
β-Lactoglobulin waa borotiinka ugu weyn ee lo'da iyo caanaha adhiga (~ 3 g / l), sidoo kale wuxuu ku jiraa noocyo kale oo badan oo naasley ah; marka laga reebo xusid mudan ahaanshaha aadanaha. Qiyaastii 20% ee borotiinnada caanaha bovine waa borotiinno whey ah, iyadoo qaybta ugu weyn ay tahay beta-lactoglobulin. β-Lactoglobulin badanaa waa maaddada ugu weyn ee budada borotiinka ku saleysan whey-ku saleysan.
Borotiinada 'Whey' waxay noqon karaan xasaasiyado cunno oo khatar ah. Caanaha Bovine waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee cunnooyinka xasaasiyadda keena, gaar ahaan carruurta. Sidaas awgeed, calaamadeynta beta-lactoglobulin ama caano waa qasab dalal badan. In kasta oo aysan jirin xaddidaad sharciyeed oo loogu talagalay borotiinnada whey, haddana waxaa si aad ah loogu talinayaa in soosaarayaasha cuntada ay tijaabiyaan culeysyo aad u hooseeya si ay u ilaaliyaan shakhsiyaadka xasaasiyadda kana fogaadaan dib u soo celinta xasaasiyadda.
waa maxay Beta-Lactoglobulin ?
Beta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) waa borotiinka ugu weyn ee borotiinka loo yaqaan 'whey protein' ee caano ifaya sidoo kale wuxuu ku jiraa caanaha xayawaanada kale. Qiyaastii 20% borotiinka caanaha bovine waa borotiinka whey, oo qeybta ugu weyni ay tahay beta-lactoglobulin. Beta-Lactoglobulin badanaa waa cunsurka ugu weyn ee budada borotiinka ku saleysan whey.
Beta-lactoglobulin waa borotiin caalami ah oo ka tirsan qoyska lipocalin. Waxay leedahay culeys molikal ah 18,300 waxayna ka kooban tahay 162 haraaga amino acid, oo ay kujirto qayb aad u sarreysa oo amino acids ah oo silsiladaysan (BCAAs).
Beta-lactoglobulin (b-lactoglobulin / BLG) waa mid ka mid ah xasaasiyadaha ugu waaweyn caanaha lo'da. Waa mid ka mid ah borotiinnada ugu caansan caanaha inay keenaan dareen-celin xasaasiyadeed, in kasta oo shakhsiyaadka intooda badani ay xasaasiyad u leeyihiin in ka badan hal borotiinno caano ah. BLG waa borotiinka ugu badan ee whey, taasoo ah 50 boqolkiiba wadarta borotiinka ku jira jajabka lactoserum iyo ku dhawaad ​​10 boqolkiiba caanaha lo'da.
Guud ahaan, globulins waa borotiinno yar yar oo isku laabma qaab aad u jilicsan, iyo lactoglobulins-ka globulins ayaa caano ku jira. Marka casein laga soo shubo caano (tusaale ahaan, rennet ama aashitada), lactoglobulinsku waxay ku dambeeyaan caarada (oo ay la socdaan lactalbumin, lactose, macdanta, iyo immunoglobulins). Borotiinku waa ku dhawaad ​​10% cabitaannada qalalan ee whey, iyo beta-lactoglobulin waa 65% 10 %kaas.
Alfa-lactoglobulin wuxuu ku lug leeyahay isku-darka lactose. Ujeedada beta-lactoglobulin ayaa si yar u cad, laakiin inkasta oo ay isku xiri karto moleekule-yaasha badan ee hydrophobic, hadana ujeedada ugu weyn ayaa laga yaabaa inay noqoto sidii isha amino acids. Beta-lactoglobulin ayaa sidoo kale la muujiyay inuu awood u leeyahay inuu birta ku xidho dhinac-biyoodka sidaa darteedna laga yaabo inuu door ku yeesho la-dagaallanka cudurrada.
Xaqiijinta xaqiiqda ah in borotiinka Whey uu yahay isku dar ah beta-lactoglobulin, alpha lactalbumin, bovine serum albumin, iyo immunoglobins. Dadku waxay badanaa u isticmaalaan whey kaabis ahaan, oo ay weheliyaan jimicsi iska caabin ah, si ay uga caawiyaan hagaajinta isku-darka borotiinka muruqyada iyo inay kor u qaadaan kobaca murqaha caatada ah.
Faa'iidooyinka macquulka ah waxaa ka mid ah caawinta miisaanka oo yaraada, astaamaha ka hortagga kansarka, yareynta kolestaroolka, neefta, dhiig karka iyo cudurka wadnaha, Yaraynta miisaanka oo yaraada dadka qaba HIV.
Si ka duwan borotiinka kale ee weyn ee whey, α-lactalbumin, ma jiro shaqo cad oo loo aqoonsaday β-lactoglobulin, tan in kasta oo ay tahay qaybta ugu weyn ee ka kooban jajabyada borotiinnada adduunka ku go'doonsan whey (β-lactoglobulin ≈⁠ ⁠65%, α-lactalbumin ≈⁠⁠ ⁠25%, serum albumin ≈⁠⁠ ⁠8%, kale ≈⁠ ⁠2%). β-lactoglobulin waa borotiin lipocalin ah, wuxuuna xiri karaa meyroololo badan oo hydrophobic ah, isagoo soo jeedinaya doorka ay ku leeyihiin safarkooda. β-lactoglobulin ayaa sidoo kale la muujiyey inay awood u leedahay inay birta ku xirto dhinaca loo yaqaan 'siderophores' sidaas darteedna waxay door ku yeelan kartaa la dagaalanka cudurada keena. Isku-darka 'la-lactoglobulin' ayaa ka maqan caanaha naaska aadanaha.
Beta-Lactoglobulin (BLG) waa borotiinka ugu badan ee whey borotiinka ku jira caanaha bovine. LG si ballaaran ayaa looga bartay warshadaha cuntada sababta oo ah nafaqo-xumada iyo saameynta ay ku yeelato hanaannada kala duwan ee noolaha.
Intaa waxaa sii dheer, BLG waxay noqon kartaa nafaqo nafaqeysan oo qiimo jaban oo si fudud oo fudud loo heli karo. BLG waxay suurtogal u tahay inay u shaqeyso sidii nafaqeysan antioxidant si fudud loo heli karo oo raqiis ku ah nolol maalmeedka. Warbixinteenii hore waxay muujisay in cysteine-ka bilaashka ah ee BLG uu door difaac ka ciyaarayo dabeecadda antioxidant-ka ee caanaha. BLG waxay mas'uul ka tahay 50% waxqabadka antioxidant-ka caanaha. Kaliya maahan BLG inay si toos ah ugu shaqeyso sidii nafaqada antioxidant, waxay sidoo kale qaadi kartaa antioxidants kale iyada oo loo sii marinayo jeebka jeebka ku xiran. Marka, waxay kordhisaa bioavailability iyo qadarka antioxidants-ka la heli karo.
β-Lactoglobulin waa borotiinka ugu weyn ee whey borotiinka ku jira caano bovine oo qiyaastii 50% borotiinka ku jira whey laakiin aan laga helin caanaha aadanaha. β-Lactoglobulin wuxuu leeyahay astaamo firfircoon oo nafaqo leh kuwaaso borotiinkan ka dhigay waxyaabo badan oo isku duuban oo cuntooyin badan iyo codsiyada bayoolaji ah.
Calaamadaha fal-celinta xasaasiyadda ee beta-lactoglobulin waxay noqon kartaa:
Gaduudasho ama finan
Budada-Lactoglobulin budada ah isticmaalka
ag-Lactoglobulin isku-darka aruurinta kuleylka sida xamuul dufanka dufanka leh ee polyunsaturated-ka leh. Perez AA, Andermatten RB, Rubiolo AC, Santiago LG Food Chem. 2014 Sep 1; 158 (): 66-72.
Qaab-dhismeedka iyo xasaasiyadda xasaasiyadda ee bovine β-lactoglobulin oo lagu daaweeyo shucaaca sonication-ka caawiyay. Yang F, Zou L, Wu Y, Wu Z, Yang A, Chen H, Li X. J Caanaha Sci. 2020 Febraayo 26
Falanqaynta genomic ee jajabyada borotiinka caano ee lo'da 'Swiss Sattle'. Macedo Mota LF, Pegolo S, Bisutti V, Bittante G, Cecchinato A. Xayawaanka (Basel). 2020 Feb 2